8 Tallaabo Oo Nolol Farxad Leh Kuu Horseedaya - Daryeel Magazine
8 Tallaabo Oo Nolol Farxad Leh Kuu Horseedaya
Waa waajib ina saaran in aynu ku dadaallno ilaalinta caafimaadkeenna jidhka, innagoo joojinayna cabbista Sigaarka, samaynaynana jimicsi badan, iyo innakoo yaraynayna dufanka ku jira cuntadeenna. Sidoo kale, waxaan wax uga qaban karnaa cafimaadkeenna xaga nafsaaniga ah.
Jimcsigu waxuu caawin karaa caafimaadka maskaxda iyo ka jidhkaba.
Waxuu beddeli karaa sida aad nolosha u aragtoo dhan, isagoo kugu caawinaya inaad ka takhalusto dareennada xunxun ee welel ka iyo cidhiidhiga ku galiya. Wax wayn buu ka
bedeli karaa dadka qaba isku buuqsanaanta, niyad-jabka iyo is-naca. Waxay kaloo caawin kartaa inay joojiso dhibaataduba inay bilaabato marka horeba.
Ogow Markasta guusha waxaa ka badan khasaaraha. waxaa lagu dhaafaa khasaaraha badan sabir iyo dhiiranaan.
Dareenkeenna oo aan u muujinno si xanaaq ah, oyno ama aan qaylinno waxay nagu caawisaa inaan ka soo kabanno dhibaatooyin aan soo
aragnay. Isku cabbudhinta dareenka iyo qiirooyinkaaga waxay keeni kartaa daal dhalin kara degganaan la’aan iyo isku buuqsanaan.
Markay dadka arrimuhu ka khaldamaan, markay aad u cabbaan waxay iska dhaadhiciyaan inay dhibka is illawsiiyaan ayna rajeeyaan inay dhammaan doonto. Taasi inaysan dhicin baa la arkaa.
Waayo qofku Hadii uu cabitaan ama qayilaad isku dhaafiyo dhibta haysta taasi macnaheedu waxa uu noqonayaa waxaad isu dhiibtay Mawjadaha walbahaarka iyo rajo la’aanta, oo aan wax ba kuu qaban karin. Waa in aad Dagaalantaa oo aad Naftaada ka Adkaataa. Hadii aad wakhti galisid in aad guulaysato waxa Hubaal ah in aad guulaysanaysid.
Helista qof lala sheekaysto
Talooyinka uu daryeelmagazine.com halkan ku bixiyay intooda badani way fudud yihiin in la raaco, haddii uu jiro qof si furan oo daacadnimo ah loola sheekaysto. Waxuu noqon karaa saaxiib, ama waxaaba anfici karta in lala kulmo dad kale oo xaalddaas oo kale ku sugan, oo is-kaashada ama koox la caawiyo. La taliyayaal iyo dhakhaatiirta maskaxda waxa si gaar ah loogu tabobaray inay dadka ka caawiyaan inay naftooda si fiican u fahmaan ayna ka adkaadaan dhibaatooyinka nolosha.
Diinta iyo Wel-welka
Qofka muslimka ah waxa uu kaga duwanyahay Dadka Diimaha kale haysta waa Farxadda iyo Daganaanshaha uu ilaahay ugu deeqay Umadda Muslimka ah.
waa dhibaato Adigoo xidhiidh la lahayn RABIGAA in aad tidhaahdo anigoo Muslim ah ayaan welwelayaa ee maxay sidani ku dhacday.
Taa micnaheedu waa xidhiidhkaaga ayaan kii lagaaga baahnaa ahayn.
Quraanka oo la akhriyo ama la dhagaysto waxa dhamaan Dhakhaatiirta islaamka ee xanuunada maskaxdu isku raaceen in ay dajiso qofka ISKU BUUQA qaba.
By Dr Abdifatah Ahmed abdikaliil.
7 Tallaabo Oo Kuu Sahli Kara In Riyadaadu Kuu Rumowdo 10 Talo Oo Kuu Horseedaya Guul Dhanka Waxbarashada Ah Psychology Dabeecadaha Dadka: Maxay Dadka Ku Neceb Ay Kuu Neceb Yihiin? Maxaa Ahmiyad kuu leh Nolosha oo aad mudnaanta koowaad siisaa?